FAHAMAZAINA TAO ANKARAMALAZA : Nanampy ireo tra-boina ny fitondrana foibe
Tsy niandry ela fa raha vao nahare ny voina nihatra tamin’ny tokantrano an-jatony tao Ankaramalaza ny fitondram-panjakana, avy hatrany dia nidina ifotony nitondra fanampiana ho an’ireo tra-boina. 25 novembre 2019
Ny sabotsy lasa teo no tonga tany an-toerana ny Praiminisitra Ntsay Christian, iraky ny Filoham-pirenena niaraka tamin’ny delegasionina notarihiny. Nifanatri-tava tamin’ny fianakaviana niharan-doza izy ireo, nampahery azy ireo manoloana ny loza nitranga ary nitondra fanampiana ho azy ireo ihany. Vary, tafo fanitso, trano lay, kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro, ireo no natolotry ny fanjakana foibe ho azy ireo, izay naterin’ny Praiminisitra tany an-toerana. Noporofoin’ny fitondram-panjakana fa tsy irery intsony ny vahoaka fa manana mpitondra afaka hiahy azy ireo raha sendra misy ny patsa iray tsy omby vava tahaka izao. Miampy ireo efa tonga tany an-toerana tamin’ io fotoana io dia fantatra fa ho avy tsy ho ela ny Kamiaon’ ny Bngrc izay hitondra ny fanampian’ny fanampiana ho azy ireo.
Raha tsiahivina dia harivan’ny zoma lasa teo, tokony ho tamin’ny 4 ora no niseho ny loza tao Ankaramalaza. Afo nolalaovin’ ny ankizy no niandohan’ny fahamaizana. Nifanandrify indrindra tamin’ny fanaovan’ny mponina raharaha any an-tsaha io ora io ka saika tsy nisy tao an-tanàna ny olon-dehibe. Nanampy trotraka izany ihany koa ny fitsoky ny rivotra ka nanamarona ny fihanaky ny afo. Tao anatin’ny minitra vitsy monja dia trano 127 no hotohoto tsy nisy noraisina izay namela tra-boina maherin’ny 300 isa. Tsy nisy noraisina ny entana tao an-trano.
Soa kosa anefa fa tsy nisy ny aina nafoy fa lehilahy iray teo an-tanàna no naratra nandritra ny fifanjevoana tao anatin’ny famonoana ny afo. Nankasitraka feno an’izao fihetsiky ny fanjakana izao ireo tra-boina satria tsy mba nihainohaino izy ireo fa tao anatin’ny iray andro monja nisehoan’ny loza dia efa tonga ny tolo-tanana sy fanampiana